आजबाट निषेधाज्ञा लागू गरिएसँगै यस्तो छ रातीकाे नियम! – PathivaraOnline
Home > समाचार > आजबाट निषेधाज्ञा लागू गरिएसँगै यस्तो छ रातीकाे नियम!
आजबाट निषेधाज्ञा लागू गरिएसँगै यस्तो छ रातीकाे नियम!
admin October 19, 2020 October 19, 2020 समाचार	0
काठमाडौ । चाडपर्व नजिकिएसंगै बढेको चहल पहलले कोरोनाको जोखिम बढाएको भन्दै आजबाट मोरङमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। पछिल्लो समय सर्वसाधारणको लापरवाही बढेको भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेको हो । त्यस्तै झापा र सुनसरीमा भने एकदिनअघिबाट नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लागू गरेका हुन्। त्यस्तै पार्टी प्रवेशका नाममा गरिने राजनीतिक दलका कार्यक्रमले पनि जोखिम बढाएको भन्दै प्रशासनले सतर्कता अपनाएको हो ।
प्रदेश १ को सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको जिल्ला मोरङमा आजदेखि कार्तिक १५ गते राती १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ। चाडपर्व र परम्पराका नाममा गरिने पूजापाठ कार्यमा संलग्न हुँदा हुने भीडभाडलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले बताए। मोरङमा साँझ ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मका निषेधाज्ञा लागू हुनेछ।
अहिले गरिएको निषेधाज्ञा दशैं तिहारका समयमा हुने विशेष भिडभाडलाई रोक्ने उद्देश्य रहेको प्रशासनले जनाएको छ । ‘त्यतिमात्र होइन शुभकामना आदानप्रदान भन्दै राजनीतिक विभिन्न संगठनका नाममा गरिने ठूलाठूला कार्याक्रमलाई पनि रोकिएको प्रशासनको भनाई छ ।
त्यसै गरी साँझ ८ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म राजमार्गमा चल्ने बाहेक लामो दुरीका बाहेक अन्य आवात जावतमा रोक लगाइएको छ। सो समय पसल, होटेलदेखि मानिसको आवत जावत समेत बन्द गरिएको छ।
नविल बैंकको त्यो भिडियो जसले छोयो नेपालीको मन (भिडियो सहित)
कोरोनाकाे कहरः चीनलाई छाड्यो, यूरोपलाइ गाँज्यो, इटली, स्पेन र फ्रान्समा एकैदिन ५०१ जनाको मृ त्यु
नेपाल—भारत सीमामा आयो यस्तो खबर ! सरकारले लियो यस्तो कदम !!